लकडाउन त्रासदीमा भ्रष्टाचार, नातावाद र फरियावाद : पिताम्बर पोख्रेल - Samajbad
लकडाउन त्रासदीमा भ्रष्टाचार, नातावाद र फरियावाद : पिताम्बर पोख्रेल
in राजनीति, विचार / वहस, विशेष, समाज
कोरोना भाइरसको कारणले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लगाईएको बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन आज असोजसम्म आइपुग्दा करिब पाँच महिना नेपाल बन्द कार्यक्रम जस्तो बन्यो । छिटफुट २ महिना पनि लकडाउनको त्रासदी भित्र गुज्रियो र गुज्रिरहेको छ । विगतका सात महिनाको यो बन्दले नेपालका उद्योग व्यवसाय बन्द भए । आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रमा कालो बादल छाईदिएको छ । आधारभुत वर्गका मानिसहरुलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ । भने अर्कातर्फ उद्योग व्यवसाय र विकास निर्माणका क्षेत्रमा संकट छाएको छ । फलस्वरुप नेपाली जनताको जनजीवीका तहस नहस भएको छ । त्यती मात्रै होईन सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
विभिन्न आँकडा अनुसार लकडाउन शुरु भएयता नेपालमा भ्रष्टाचारमा नाटकीय रुपले बृद्धि भएको छ । बिषेश गरी स्वाथ्य क्षेत्र र विकासका योजनाहरुमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको छ । बन्दाबन्दी सुरु भएकै सेरोफेरोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको कोरोना स्वास्थ्य सामाग्रीमा ५५ करोड भ्रष्टाचारले ठूलो चर्चा पायो । त्यसयता पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका समाचारहरु आउने क्रम जारी नै छ । यसै बीचमा स्थानीय तहका सरकारले नै बजेट पास गरे । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटको त कुरा नै छोडौ । स्थानीय सरकारले ल्याएका बजेटमा कार्यान्वन तहमा ब्यापक भ्रस्टाचार बढ्दै गएको छ ।
कोरोना महामारीको बहाना बनाएर धेरै मान्छेको जमघट गराउन नहुने भन्दै जनप्रतिनिधिहरु र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरुले गुपचुप रुपमा विकासे योजनाका उपभोक्ता समिति बनाउने, परिवारवाद फरियावादलाई पक्षपोषण गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गरे । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली बिल पास गर्ने, मेसिनको कार्य अवधि फर्जी बनाएर बजेट निकासा लिने र बजेट सकाउने दुष्कर्महरु गरे । कोरोनाको बाहानामा अनुदान र खरिदमा ब्यापक घोटाला भईरहेको छ । सत्ता भोग विलासमा मस्त छ । जनजीवन बष्टकर बन्दै गको प्रति सरकारलाई कुनै हेक्का नै छैन । आफ्ना मान्छे लाइ कसरी पद र पैसा बाड्ने भन्ने नै सरकारको अर्जुन दृष्टि रहेको छ ।
कोरोना के हो ? यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा कति मान्छे को निधन भयो ? भन्ने विश्वस्त तथ्याङ्क सरकारले दिन सकेको छैन । संक्रमणको दर र मृत्युदर हेर्दा लकडाउन भएको अवस्थामा र खुल्ला अवस्थामा खासै अन्तर देखिएको छैन । त्यसैले अहिले बन्दाबन्दीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले बन्दान्दीलाई माछा मार्न पानी धमिलो बनाएको प्रतित भईरहेको छ । कोरोना सरकारका मान्छेहरुलाई कमाउने राम्रो अवसर बनेको छ । यो गम्भीर बिडम्बनाको कुरा हो । भोका मान्छेहरुलाई लखेट्ने, अपमान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देशको बेइज्जती गर्ने कार्यमा सरकार लागेको छ ।
त्यसैले अब सबैले बुझ्ने बेला आईसकेको छ । अझ हामीले बुझेनौ भने धेरै ढिला हुने अवसथा देखिएको छ । जनतामारा बन्दाबन्दीको बिकल्प खोज्नु पर्छ । जनताको दैनिकी सहज बनाउनका लागि सबै व्यवसायहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न दिनु पर्दछ । यसको मतलब कोरोना केही होइन अथवा लापरबाही गर्नु पर्छ भन्ने होइन तर व्यक्तिगत र सामाजिक तहमा सवाधानी अपनाउनु पर्दछ । सामाजिक दुरी कायम गर्नुको साथै सरसफाई, मास्कको प्रयोग र आहारा विहारमा ख्याल पुर्याउनु पर्दछ ।
आजसम्म बन्दा बन्दीले नेपालमा केबल भ्रष्टाचार र सत्यानाश मात्र दिएको सहजै भन्न सकिन्छ । बन्दाबन्दीको केही उपलब्धि देखिएको छैन । सरकारको बन्दाबन्दी रणनीति पुरा असफल भएको छ । बन्दाबन्दीको यो अवधिमा भएको क्षतिको पूर्ति सरकारले जनतालाई दिनु पर्दछ । बन्दाबन्दी औचित्यहीन प्रमाणित भैसकेकाले अब यस खालका गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन ।
लेखक पोख्रेल समाजवाद डटटिभीका प्रबन्ध निर्देशक हुनु ।
रोल्पाबाट चर्चित जनकलाकार पुनसहित २ जना पक्राउ
चुनावी संकटले निम्त्याउँदै अमेरिकी प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाकै प्रलय